Manchester City Oo Dooneeysa Reece-James – Garsoore Sports
Manchester City Oo Dooneeysa Reece-James
Manchester City ayaa isha ku heysa inay heshiis ka gaarto saxiixa dambeedka middig ee kooxda Chelsea iyo xulka England Reece James xagaagan.
Da’yarkan ka qalin jebiyay akaadeemiyada Blues ayaa heerar sarreeya ku cayaarayay labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay. Isagoo xilli ciyaareedkii 2018/19 amaah ku qaatay kooxda Wigan, James wuxuu haatan boos ka helay kooxda koowaad ee Chelsea wuxuuna boos joogta ah ka heystaa xulka Ingiriiska.
Wuxuu Chelsea u saftay 47 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii dhowaa, waxaana uu ciyaaray 90ka daqiiqo oo buuxa markii kooxda macalin Thomas Tuchel ay ka adkaatay City finalka Champions League-ga.
Warbaahinta The Athletic ayaa haatan sheegaysa in tayadiisa ay soo jiiteen indhaha macalinka Manchester City ee Pep Guardiola oo ka fiirsanaya inuu lasoo saxiixdo xiddigan.
City durbaba waxay haystaan laba daafac middig oo waaweyn laakiin awooda James ee ah inuu khadka-dhexe kubbadaha kusoo jiidi karo marka loo baahdo ayaa soo jiidatay macalin Pep, inkastoo Kyle Walker uu siddaas oo kale u sameeyo kooxdiisa haddaha James ayuu u arkaa xalka taagan haatan.
Tuchel uma arki karo James inuu yahay daafaca middig ee muddada dheer ee kooxda wuxuuna garowsanayaa in Cesar Azpilicueta uu aad uga habboon yahay doorkaasi.
Chelsea waxaa si aad ah loola xiriirinayaa daafac Inter ee Achraf Hakimi, haddii saxiixiisa oo ay tartan adag kala kulmeyso kooxda PSG ku guuleeysato waxay durbaba u muuqataa in Thomas Tuchel aanu kalsooni ku qabin James, taasna ay wadada u fureyso isku deyga Manchester City.
Liverpool Oo Wadahadallo Kula Jirta Maxamed Saalaxa Xiga – Arsenal Ayaa Iska Fasaxday